कोरोना केही होइन रे ! परिवार सदस्य वा आफैंलाई लागेपछि थाहा हुन्छ – Health Post Nepal
कोरोना केही होइन रे ! परिवार सदस्य वा आफैंलाई लागेपछि थाहा हुन्छ
२०७७ भदौ ३१ गते ११:१८
काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमण निरन्तर रूपमा बढिरहेको छ। हालसम्म भक्तपुरमा १ हजारभन्दा बढी जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको लागि भक्तपुर जनस्वास्थ्य कार्यलयले कसरी काम गर्दै आएको छ, अबको योजना कस्तो रहेछ छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर जनस्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख कृष्णबहादुर मिजार सँग हेल्थपोस्टकर्मी रेणु त्वानाबासुले गरेको गरेको कुराकानीः
भक्तपुरमा कोरोना संक्रमित बिरामीका लागि के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ?
भक्तपुरमा कोरोनाका लागि सुरुमा नै खरिपाटी आइसोलेसन बनाइएको थियो। जुन विदेशबाट ल्याएर राख्ने गरेका थियौं। दुवाकोटको केएमसी अस्पतालमा एउटा आइसोलेसन सञ्चालन गरिराखेका छौं। त्यस्तै अहिले दूधपाटीमा रहेको भक्तपुर अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पताल बनाइएको छ।
भक्तपुरका सबै नगरपालिकामा अस्पताल छन् त?
भक्तपुरमा चार नगरपालिका छन्। ती सबै नगरपालिकामा अस्पताल छैनन्। भक्तपुर नगरपालिकामा अहिले एउटा अस्पताल बनाउँदै छौं। सूर्यविनायकमा दधिकोटस्थित अस्पताललाई नगरपालिकाले चलाउने भनिएको छ। मध्यपुरमा नेपाल–कोरिया मैत्री अस्पताल छ भने चाँगुनारायणमा एउटा पनि अस्पताल छैन।
भक्तपुर अस्पताललाई कोरोना अस्पतालमा रुपान्तरण गर्दा अरू रोगका बिरामी मर्कामा परेको देखिन्छ नि?
मलाई त्यस्तो त लाग्दैन। होम आइसोलेसनमा बसेका बिरामीहरूले नियम पालना भने गरेका छैनन्। होम आइसोलेसनमा बसेका बिरामीहरू परिवारसँगै खाने, मास्क नलगाई नजिकै बस्ने गरेका छन्।
मर्कामा त परेका छन्, तर त्यसलाई समाधान गर्न ती बिरामीका लागि नजिकै रहेको मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र र क्यान्सर अस्पतालबाट ओपिडी सेवा दिने निर्णय भएको छ। त्यहाँबाट लिन सकिन्छ र लिइरहेको पाइन्छ।
भक्तपुर अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द भएपछि स्वास्थ्य बिमाको केही अर्थ नभएकोे बिरामीहरूको गुनासो छ त?
हो, अब स्वास्थ्य बिमा कार्ड त भक्तपुरको जनस्वास्थ्य सेवा केन्द्र, भक्तपुर अस्पताल, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र, क्यान्सर अस्पतालमा मात्र लागू हुन्छ। त्यही कारण भक्तपुर अस्पतालबाहेक अरू अस्पतालबाट स्वास्थ्य बिमा कार्डको छुट दिने भनिएको छ।
भक्तपुरमा कोरोनाका बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन एम्बुलेन्स सुविधा कस्तो छ?
त्यति राम्रो छैन। सबै नगरपालिकामा एउटा एउटा एम्बुलेन्स हुनुपर्ने हो तर यहाँ छैन। त्यही कारणले भक्तपुर अस्पतालको एम्बुलेन्स र अरू अस्पतालको एम्बुलेन्स उपयोग गरेका छौं।
भक्तपुरमा कतिवटा आइसोलेसन बनाइएको छ त?
भक्तपुरमा पहिलो आइसोलेसन खरिपाटीको हो। अब त्यसले धान्न नसक्ने अवस्था आएकाले भक्तपुर अस्पताल पूरैलाई कोरोना संक्रमित हेर्ने अस्पताल बनाइएको हो। दुवाकोटको केएमसी अस्पताल र मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले केही दिनअघि मात्र बोडेस्थित कृषि विकास केन्द्रमा २० बेडको आइसोलेसन बनाएको छ।
अहिले चारैवटा नगरपालिकाका संक्रमित त्यही आइसोलेसनमा राख्ने गरेका छौं।
यस जिल्लामा आइसियू बेडको व्यवस्था गरिएको छ कि छैन त?
भक्तपुर अस्पतालमा आइसियू बेड छ। त्यहाँ तीन बेड सञ्चालन गरिराखेको छ। एउटा नयाँ मेसिन आएको छ। अब अर्को एउटा आउन बाँकी छ। जम्मा पाँचवटा आइसियू गर्ने अवस्थामा छ। अरू बाँकी बिरामीलाई काठमाडौं, धुलिखेल लैजानुपर्ने अवस्था छ।
तपाईहरूले यसका लागि केही पहल गर्नुभएको छैन त?
हामीले आइसोलेसन, आइसियू र त्यसलाई चाहिने आवश्यक जनशक्तिका लागि प्रदेश सरकारलाई आह्वान गरिरहेका छौं।
यस्तो अवस्थामा चाहिने पूर्वाधार आपूर्ति हुन्छ भन्ने लाग्छ त?
कोरोना भएका र परिवारका सदस्य गुमाइसकेका र आफैंले भोगिसकेकालाई मात्र थाहा छ कोरोना के हो भनेर। यस्तो भन्दैमा डराएर घरमै बस यो रोगले ज्यान नै लिन्छ भन्न खोजेको होइन। तर कमजोर व्यक्तिहरूलाई यसले चाँडै च्याप्ने भएकाले सर्तकता अपनाएर हिँड्नु मात्र भनेको हो। कुनै पनि रोगलाई हेलचेक्र्याइँ गर्नु भने हुँदैन।
पहिला त सामान पाउन अलि गाह्रो थियो। अहिले त सबै सामानहरू पाइन्छ। जस्तै पिपिईलगायतका सामान आइरहेका छन्। त्यस्तो खासै समस्या छैन।
होम आइसोलेसनमा बस्नेहरू सबै अनुशासित भएर बसेका छन् जस्तो लाग्छ?
उनीहरूलाई होम आइसोलेसन के हो नै बुझेका छैनन् जस्तो लाग्छ मलाई। होम आइसोलेसन भनेको त छुटै एउटा कोठामा बस्ने अनि १४ दिनसम्म त्यो कोठाबाट नस्किने, उसले खाएका भाँडाकुँडा माझ्ने, लुगाहरू सबै आफैले धुने गर्नुपर्छ। सकिन्छ भने त शौचालय पनि छुट्टै प्रयोग गर्न दिनुपर्ने हो। तर के गर्ने गर्दैनन्।
भक्तपुरमा रहेका संक्रमितहरू लक्षण भएका छन् कि नभएका बढी छन्?
कोही लक्षण भएका छन् भने केही लक्षण नभएका पनि छन्। लक्षण भएकालाई होम आइसोलेसनमा नराखी खरिपाटी, दुवाकोट वा भक्तपुर अस्पताल पठाउने गर्छौं। लक्षण नभएकालाई होम आइसोलेसनमा राख्ने गरेका छन्।
अहिले जनताहरू कोरोना भाइरस केही होइनन् भन्ने गर्छन्। खास किन यस्तो भनिएको होला?
अब आफूलाई नभएसम्म केही होइन, आफ्नो परिवारको कोही सदस्य वा आफैलाई लाग्यो भने थाहा हुन्छ यो केही हो कि होइन। त्यसैले कोरोना नलागेका व्यक्तिहरूले केही होइन भनिरहेका छन्।
यो भाइरसबाट कसरी बच्न सकिन्छ?
अरु रोग भए औषधी खाएर निको हुन्छ। यसको त औषधी आएको छैन। त्यसैले यसको औषधी त होइन तर प्रोटेक्सनका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने जस्तै बाहिर जाने बेलामा मास्क लगाउने, सेनिटाइजर लगाउने, वा साबुनपानीले हात धुने र सामाजिक दुरी बनाएर कुरा गर्ने गर्दा रोग लाग्नबाट बच्न सकिन्छ।
अर्को भनेको कोही कोरोना संक्रमित छन् र आफूले स्वाब टेस्ट गराउन दिएको छ भने रिपोर्ट नआएसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ। कुरा गर्ने बेलामा पनि मास्क लगाएर नै गर्नुपर्छ। मानिसहरू मास्क लगाए पनि चिउँडोमा उड्काएर बसेको देख्छु, जुन गलत हो।
भक्तपुर जनस्वास्थ्य केन्द्र